Haddii uu dab qabsado guriga, waxaa aad iyo aad muhiim u ah in aad taqaanid habka saxa ah ee loo dhaqmo. Sidee baad u dhaqmaysaa? Halkan baad ka daawan karaa filimmo aad ku soo wareejisan kartaa dhaatadaada, si aad u daawato, xitaa adiga oo aanu kuugu jirin guriga internet.
Waxaa gubanaya gurigaaga oo dabaq ah – Sidee baad u dhaqmaysaa?
Dab waxaa uu u bilaami karaa, si lama filaan ah. Aqoon aad u leedahay, habka loo dhaqmo iyo waxa la samaynayo waxay badbaadin kartaa naftaada iyo nafaha dad kale. Fiirso filinkan, oo ah mid kuu diyaarinaaya, habka saxa ah ee loo dhaqmo iyo wax la samaynayo, haddii uu dab qabsado gurigaaga oo dabaq ah.
Waxaa gubanaya gurigaaga – Sidee baad u dhaqmaysaa?
Dab waxaa uu u bilaami karaa, si lama filaan ah. Aqoon aad u leedahay, habka loo dhaqmo iyo waxa la samaynayo waxay badbaadin kartaa naftaada iyo nafaha dad kale. Fiirso filinkan, oo ah mid kuu diyaarinaaya, habka saxa ah ee loo dhaqmo iyo wax la samaynayo, haddii uu dab qabsado gurigaaga.